वैदेशिक रोजगारीमा जानेको न श्रीमती, न सम्पत्ति ! – Yuwa Aawaj
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको न श्रीमती, न सम्पत्ति !
चैत्र २१, २०७७ शनिबार 717
काठमाडौँ : पछिल्लो समय बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगारीले देशमा रेमि’ट्यान्स त भित्र्यायो। तर, यसले सामाजिक सम्बन्ध र धेरै परिवारलाई छिन्नभिन्न पनि पारेको छ।
छोरा विदेश जाने, बुहारी सहर पस्ने क्रम बढ्दो छ। देशका अधिकांश गाउँघरमा वृ’द्धवृद्धा मात्रै छन्। श्रीमान् विदेशमा दुःख गर्ने, श्रीमती यता पैसा उडाउने गरेका घटना थुप्रै देखिएका छन्। विदेशमा रगतपसिना बगाएर फर्किंदा न श्रीमती न
सम्पत्ति न त आफन्तकै अवस्थामा पुगेका छन्। यस्ता घटनामा पीडित भएकाहरूलाई न्याय दिलाउन कानुन अभाव देखिएको छ। श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को बिहे गर्ने पुरुषले ब’हुविवाहमा स’जाय भोग्नुपर्ने हुन्छ।
तर, यस्तै अवस्थामा महिलालाई स’जाय छैन। पहिलो श्रीमान्सँग स्वतः सम्बन्धवि’च्छेद भएको ठह’रिने कानुनी व्यवस्था छ।अधिवक्ता प्रियहरि भण्डारीका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिको हकमा सम्बोधन गर्ने विशेष कानुन छैन।
घरसारमा पठाएको रकम मासि’यो, ना’सियो भनेको अवस्थामा स’जाय गर्ने कानुन नै छैन। देवानी सं’हिताको लेनदेन महलमा साहु र आसामीको हकमा ऋ’ण लिएको, दिएको, खाएको देखियो भने सावाँब्या’ज तिराइदिने, सम्पत्ति ब’न्डा गराइदिने व्यवस्था छ।
कानुनअनुसार एकाघरमा श्रीमान् श्रीमती, दाजुभाइको बीचमा भएको सगोलको कारोबारमा ऋ’णधनको अ’र्थ लाग्दैन। यसलाई सगोलको सम्पत्ति मानिन्छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।
Prevप्रिन्सले हरेक प्रतियोगिता जित्दा गौतमबुद्ध रंगशाला निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
Nextहोसियार ! कहिल्यै नखानुहोस् यी रोग भएका मानिसले कागती !
किड्नी फेल कसरी हुन्छ ? किड्नी सम्वन्धि यी ७ महत्वपूर्ण जानकारीहरु जानिराखौं ! (6649)